स्थानीय निर्वाचनमा कलाकर्मीका योजना - Naya Patrika
स्थानीय निर्वाचनमा कलाकर्मीका योजना
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । प्रचारप्रसारमा राजनीतिक क्रियाकलाप बाक्लिएका छन् । केही सेलेब्रिटी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार नै बनेका छन् भने कतिपय सेलेब्रिटी आफूअनुकूल पार्टीका झन्डा बोकेर भोट माग्न व्यस्त देखिन्छन् । तर, धेरै सेलेब्रिटी छन्, जो पार्टीका कार्यकर्ता नभएर सचेत नागरिकको हैसियतमा भोट खसाल्न आतुर छन् । नयाँ पत्रिकाका रामजी ज्ञवालीले केही सेलेब्रिटीसँग स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो योजना छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले जवाफ दिएका छन् :
अहिले चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त छु । स्थानीय निकायको निर्वाचनले ठिकै–ठिकै छोएको छ भन्नुप¥यो । मैले विगतका निर्वाचनमा जहिल्यै एउटा पार्टीगत धारमा भोट हाल्दै आएकै हुँ अर्थात् एकछापे । अब भने मेरो सोच बदलिएको छ । यो निर्वाचनमा पुरानो ‘ट्रेन्ड’ बदलेर भोट हाल्दै छु । किनभने, मजस्ता एकछापे भोटरका कारण नेताहरू बेइमान भए भन्ने मेरो मूल्यांकन हो । जे गरे पनि भोट हालिहाल्छन् भनेर आधार पाएपछि नेता र पार्टी बिग्रिँदा रहेछन् । यसपालि म पार्टी हेरेर होइन, व्यक्ति हेरेर भोट हाल्ने योजनामा छु । राम्रा उम्मेदवार जुनकुनै पार्टी या स्वतन्त्र पनि पर्न सक्छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको भोटर लिस्टमा मेरो नाम छ । यसपटक म जसलाई भोट दिन्छु, उसले म र समाजलाई धोका नदेओस् भन्ने नै मुख्य चाहना हुनेछ ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ फिल्मको तयारीमै व्यस्त छु । तर, पनि सचेत नागरिकका नाताले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार रोजेर भोट त हाल्नैपर्छ । आफ्ना प्रतिनिधि छान्न जीवनमै पहिलोपटक आएको अवसर पनि हो । मेरो नाम ललितपुर महानगरपालिकामा छ । भोट कसलाई हाल्छु त भन्दिनँ, गोपनीयताको कुरा पनि हो नि ! तर, हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छेलाई जिताउने नै मेरो उद्देश्य छ ।
दुई दशकपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लाग्नु सबै नेपालीका लागिझैँ मेरा लागि पनि खुसीको कुरा हो । मेरो भोटर लिस्टिङ स्याङ्जामा छ । निर्वाचनमा स्याङ्जा गएर भोट हाल्ने योजना छ । उम्मेदवार छान्दा काम गर्ने क्षमता छ÷छैन भन्ने नै पहिलो नम्बरमा सोच्नेछु । काम गर्न रहर गर्ने उम्मेदवार जिताउन नै स्याङ्जा जान लागेको हुँ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भोट खसालेको छैन । नेतालाई भोट हालेर जिताउनुपर्छ भन्ने इच्छा ममा कहिल्यै जागेन । यसपालि पनि भोट हाल्ने कुनै योजना छैन । आखिर भोट किन हाल्ने ? राजनीति गर्नेहरूले जनताका लागि केही राम्रो काम गरेर देखाएको भए पो उनीहरूप्रति आकर्षण बढ्छ । मेरो त रुचि भनेकै फिल्म हो । जेठ १२ देखि रिलिज हुन लागेको ‘पर्व’को तयारीमै व्यस्त हुन्छु ।
म त स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट हाल्न आतुर छु । निर्वाचन हुनु भनेको त सकारात्मक कुरा हो नि ! लामो समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै छ, अवसर पनि आएको हो नि ! बानेश्वर बत्तीसपुतलीको भोटर लिस्टमा नाम छ, यहीँबाट सहभागी हुने हो । भोटका लागि पार्टी–सार्टी हेरिँदैन, राम्रो व्यक्तिलाई दिने हो । केही गर्न सक्ने आँट भएको उम्मेदवार नै मेरो रोजाइमा पर्छन् । कसलाई भोट दिने भनेर म त निश्चित भइसकेको छु । र, जसलाई भोट दिन्छु, उसले जित्छ भन्नेमा पनि ढुक्क छु ।
निर्वाचनमा भोट त हाल्नैपर्छ । भोट हाल्न म त सुर्खेत पुग्नुपर्छ । निर्वाचनको एक–दुई दिनअघि काठमाडौंबाट सुर्खेत जानेछु । कसलाई भोट हाल्ने भनेर त भन्न सक्दिनँ, तर त्यो क्षेत्रमा जसले राम्रो काम गर्दै आएको छ, उही उम्मेदवारलाई जिताउन भोट खर्च गर्नेछु । पार्टीभन्दा पनि उम्मेदवार छानेर भोट दिनेछु ।
स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने योजना अहिलेसम्म बनाएको छैन । सायद, भोट हाल्दिनँ होला । मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म नेपाली जनताले भोटिङ गरेर पाप गरिरहेका छन् । यो पापको भागिदार म हुन चाहन्नँ । जनताले हाम्रा बाबुबाजेका पालादेखि अहिलेसम्म भोट हालिरहेका छन्, तर नेताले चाहिँ देश र जनताका लागि के गरे त ? जनताले सधैँ भोट दिएर माथि पुर्याउने अनि उनीहरू भ्रष्टाचार गरेर भुँडी भर्ने ? यदि, उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने कुनै स्पष्ट आधार देखाउन कसैले सक्छ भने म भोट हाल्न तयार छु ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन तातिरहेको छ, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु । तर, आफूलाई आफ्नै कामको व्यस्तता छ । दिनभर रेकर्डिङ स्टुडियोमै व्यस्त भइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई खासै चुनाव लागेको छैन । भोट हाल्ने हो भने म गुल्मी पुग्नुपर्छ । तर, भोल्ट हाल्ने÷नहाल्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यो बीचमा विदेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । नेपालमै भएँ भनेचाहिँ भोट हाल्न जाने सम्भावना छ । तर, कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन महत्वपूर्ण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । निर्वाचनमा हामी जस्ता उम्मेदवारलाई जिताउँछौँ, गाउँ, समाज र टोलको विकास उस्तै गतिमा अगाडि बढ्छ । यसकारण म भोट हाल्ने योजनामा छु । काठमाडौं महानगरपालिका–३५ कोटेश्वरमा मेरो नामावली छ । पार्टी र झन्डा हेरेर होइन, उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्छु । यस्तो व्यक्तिले जितोस्, जसले केही गर्ने आँट राखोस् ।
निर्वाचन हुने कुराले खुसी लागेको छ । तर, मलाई भने निर्वाचन लागिसकेको छैन । श्रमजीवीलाई अहिल्यैदेखि निर्वाचन लागे त सबै काम खत्तम भइहाल्छ नि ! काठमाडौं–३२ जडीबुटीबाट भोट दिँदै छु । अहिलेसम्म कसलाई दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । हामी नेपाली जहिल्यै भोट दिन्छौँ, तर पछि केही गरेन भन्दै उही उम्मेदवारलाई गाली गर्छौं । त्यसकारण म त ३० गते रातिसम्म सोच्छु अनि ३१ गते भोट दिन्छु ।
निर्वाचनमा भोट खसाल्न पाल्पा पुग्नुपर्छ । तर, जान्छु/जान्नँ निश्चित छैन । नजिकिँदै गरेको परीक्षाका कारण मैले पाल्पाको यात्रा निश्चित गर्न सकेको छैन । त्यसो त हाम्रोमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने हो । एक मनले सोच्दा खासमा मलाई भोट हाल्न खासै उत्साह छैन । अर्को मनले सोच्दा धेरैपछि आएको अवसर नछाडौँ कि भन्ने पनि लाग्छ । यदि पाल्पा गएँ भने भोट खेर नजाने गरी उम्मेदवार रोज्नेछु ।
भोट दिने कि नदिने अन्योलमै छु । एउटा मनले भोट दिनुपर्छजस्तो पनि लाग्छ, अर्को मनले नदिऊँ कि भन्ने पनि हुन्छ । भोट हाल्नका लागि लमजुङ पुग्नुपर्छ । गाउँका सबैले भोट त दिनुपर्छ भन्छन् । सबैको सुझाबका कारण पनि लमजुङ गएर भोट हाल्नुपर्छ कि भन्ने मन बलियो हुँदै छ । खासमा पार्टी र नेताले हाम्रो भोटको सदुपयोग नगर्ने भएकाले मन परेको हो । आजसम्मको अवस्थाले यस्तै देखाउँछ नि ! यदि यसपटक भोट दिए“ भने त सयपटक सोचेर सही व्यक्ति नै रोज्नेछु ।
विगतका कुनै पनि निर्वाचनमा भोट हालेको अनुभव छैन । नेपालको राजनीतिक गति नै सही लाग्दैन । त्यसैले पनि भोटप्रति खासै रुचि छैन । नेताहरूले राम्रो काम गरेर देखाएको भए न भोट हालौँ भन्ने लाग्थ्यो होला । म त नेताहरू नसुध्रिएसम्म भोट नै नहाल्ने निर्णयमा पुगेको छु।
चुनावी माहोलले छोएको छैन, कामको व्यस्तताका कारण । तर, भोटचाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने सोच छ । तर, कसलाई भोट दिने भन्ने यकिनचाहिँ भएको छैन । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकाबाट भोट हाल्नुपर्छ । केही दिनमै घरसल्लाह गरेर भोट कसलाई दिने भन्नेमा निर्णय लिइनेछ । स्थानीय निकायमा भोट हाल्ने पहिलो अवसर भएकाले पनि छुटाउँदिनँ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुलाई मैले अवसरका रूपमा लिएको छु । तर, कामको व्यस्तताका कारण गाउँ गएर भोट हाल्न समय मिल्छ/मिल्दैन अझै निश्चित भइसकेको छैन । निर्वाचनमा सही मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । आमनेपालीले यही धारणा राखे राजनीतिक गति पनि सही हुन सक्थ्यो ।